Dan Riccio "mashruuca cusub" ee Apple waa muraayadaha xaqiiqda dhabta ah | Waxaan ka socdaa mac
A dabayaaqadii Janaayo, Apple ayaa ku dhawaaqday in Dan Riccio, oo ah hogaamiyaha Hardware Engineering iyo madaxa kooxda naqshadeynta Apple sanadihii la soo dhaafay, ay la wareegi doonaan mashruuc cusub. Ilo wareedyada qaar ayaa saadaaliyay in Waxay noqon kartaa gaariga Apple ama ku dhawaaqida bixitaanka shirkadda.
Hagaag, maya. Sida lagu sheegay Bloomberg, mashruucaas cusub waa muraayadaha indhaha ee xaqiiqada lagu daro taas oo Apple ay ka shaqeyneysay dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyo tan, haddii aan fiiro gaar ah u yeelano xanta ugu dambeysay, wuxuu yeelan doonaa qiimo dhan 3.000 euro. John Tenus waxaa loo magacaabay Chief Engineer Hardware-ka meeshiisii.
Sidaan soo sheegay, mashruuca Apple ee la kordhiyay iyo muuqaalka dhabta ah ee muraayadaha indhaha ayaa soo socday dhowr sano. Sida laga soo xigtay Bloomberg, Riccio ayaa mas'uul ka noqon doona xalinta dhibaatooyinka ku soo food saaray waaxdan si ay u fuliso mashruucan, mashruuc ay ku jiraan in ka badan 1.000 injineero.
Shaqada Apple ee qalab heer sare ah oo diirada saaraya VR oo leh awoodo dhab ah oo la kordhiyay ayaa la kulmay caqabado horumarineed, dadka ku dhex nool Apple waxay aaminsan yihiin in diirada dheeriga ah ee Riccio ay caawin karto. In kasta oo uu Riccio yahay madaxa mashruuca, haddana Mike Rockwell, oo ah madaxweyne ku xigeenka shirkadda Apple, maalinba maalinta ka dambaysa ayuu wadaa oo wuxuu leeyahay in ka badan kun injineero ka shaqeeya labada qalab.
Muraayadaha qaarkood meel ay gaari karaan dad aad u yar
Toddobaadkii la soo dhaafay, warfaafinta ayaa sheegtay in qiimaha muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay iyo kuwa la taaban karo Apple wuxuu noqon doonaa kudhowaad 3.000 oo yuuro wuxuuna yeelan lahaa laba shaashadood oo leh 8K xal. Sida muuqata, Apple ujeedkiisu waa inuu soo bandhigo laba nooc: mid guud iyo mid kale oo loogu talagalay xirfadleyda (iyadoo la raacayo isla wadadii Microsoft dhowr sano ka hor la gashay Hololens).
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Dan Riccio "mashruuca cusub" ee Apple waa muraayadaha xaqiiqda dhabta ah
Qiimo dhimis weyn oo loogu talagalay Apple Watch Series 6 GPS 44mm cusub